फेरिएको हो म्यानचेस्टर सिटीको डिफेन्स?
नेपाल लाइभ मंगलबार, पुस ७, २०७७, ०७:२१
काठमाडौं- प्रिमियर लिगमा साउथह्याम्पटनलाई १-० ले हराएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले गोलमा संघर्ष गरिरह्यो। खेलमा १६औँ मिनेटमा रहिम स्टर्लिङको गोलमा बनाएको अग्रता जितका लागि पर्याप्त भए पनि पोस्टका पाँच प्रहारमा थप गोल हुन सकेन।
प्रिमियर लिग उपाधिको अडकल भइरहँदा यसअघि सिटीको डिफेन्समाथि प्रश्न उठिरहेको थियो। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा कम गोल खाने टिम सिटी नै देखिएको छ। सिटीले १३ खेलमा १२ गोल खाएको छ। जुन प्रिमियर लिगमा अरु टिमको भन्दा राम्रो हो। तर गरेको गोल संख्यामा भने सिटीको अवस्था उति राम्रो देखिँदैन।
सिटीको डिफेन्समा रुबेन डायस र जोन स्टोन्सले राम्रो भूमिका खेलिरहेका छन्। भिन्सेन्ट कम्पनीले सिटी छाडेपछि डिफेन्समा समस्या देखिने अनुमान अहिले डायस र स्टोन्सको जोडिले गलत साबित गरिरहेका छन्। यो सिजन सिटीको छ खेलमा ‘क्लिन सिट’ त्यसैको प्रमाण हो। जुन प्रिमियर लिगमा अरु क्लबको भन्दा राम्रो हो।
साउथह्याम्पटनसँग म्यानचेस्टर सिटीको खेल हुँदा सिटीमाथि सहज अवस्था थिएन। प्रिमियर लिगको शीर्ष चारभित्र जान संघर्षमा रहेको सिटीमा डिफेन्समाथिको अविश्वास भने यही खेलमा अझ तोडियो। हुन पनि साउथह्याम्पटनले पछिल्लो सात प्रिमियर लिग घरेलु मैदानको खेलमा कम्तिमा दुई गोल गरेकै थियो। तर डायस र स्टोन्सको सम्हालिएको खेलले सिटीलाई कठीन जित मिल्यो।
लिगको यो अवस्थामा सिटीले पछिल्लो पटक २०१७-१८ र २०१८-१९ को लिग जित्दा मात्रै कम गोल खाएर बढी ‘क्लिन सिट’ बनाउन सकेको थियो। लिभरपुलले लिग जितेको गएको सिजन १३ खेल सकिँदा म्यानचेस्टर सिटीले १४ गोल खाएको थियो।
‘डिफेन्समा हामीले राम्रो गरिरहेका छौँ। गएको सिजन हामीले धेरै संघर्ष गरेका थियौँ, अहिले डायसले धेरै मद्धत गरिरहेका छन्। स्टोन्सको पछिल्ला खेलहरु पनि निकै राम्रो भइरहेको छ’ गार्डिओलाले भनेका छन्।
डायस बेनफिकाबाट यस्तो बेलामा आएका थिए जब म्यानचेस्टर सिटी लेस्टर सिटीसँग ५-२ को हारको पीडामा थियो। डायस आएपछिको समय गार्डिओलाले खोजिरहेको सेन्टर डिफेन्डर भेटिएको देखिन्छ। अहिले डायसले कम्पनीले सिटी छाडेपछिको रिक्त स्थान पूरा गरिरहेका छन्। डायसपछि टोटनह्यामसँग २-० ले हारेबाहेक अरु खेलमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेका छन्।
डायस नहुँदा सिटीको गोलको अनुपात एक खेलमा ०.९ को थियो, डायस पछिको समय त्यो अनुपात ०.५ को देखिन्छ। डायस आएपछिको ११ खेलमा ६ गोल खाएको सिटीले उनी नहुँदाको २० खेलमा १८ गोल खाएको थियो।
अहिले डायससँगै साझेदारीमा को भन्ने प्रश्नमा सबैभन्दा अघि स्टोन्सको नाम छ। उनले प्रशिक्षक गार्डिओलाको विश्वास जितेका छन्। सिटीको पछिल्लो खेलहरुमा डायससँगको साथमा स्टोन्सको भूमिका पनि बलियो देखिन्छ।
२०१९-२० को सिजनमा सिटीले खेलेका ५९ खेलमा स्टोन्सले जम्मा १६ खेल खेलेका थिए। चोटका कारण गएको सिजन धेरै खेल गुमाएका उनी अहिले सिटीबाट राम्रो उपस्थिति जनाउन पाइरहेका छन्। स्टोन्सको ९५.१ प्रतिशतको ‘पासिङ एक्युरेसी’ प्रिमियर लिगमा डिफेन्डरको सबैभन्दा राम्रो पास हो।
वेस्टब्रुमसँग १-१ को बराबरी भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले २६ सट प्रहार गरेर पनि गोलमा कमजोर देखिएको थियो। जसमा ७ सट टार्गेटमा थियो। ७८ प्रतिशत समय बलमा नियन्त्रण बनाएको सिटीका लागि एक आत्मघाती गोल जितमा बाधक बन्यो।
गाब्रियल जिसस फिट नहुँदा साथै सर्जियो अग्युरोसमेत चोटमा रहँदा म्यानचेस्टर सिटीमा गोलमा बढ्ने खेलाडीको अभाव देखिएको छ। सिटीको डिफेन्समा समस्या पर्ने अनुमानविपरीत कमजोरी स्ट्राइकरमा देखिँदा टिमको सन्तुलन मिल्न सकेको छैन। १३ खेलमा १९ गोल गर्नु गार्डिओलाको समयमा कमजोर तथ्यांक हो। गएको सिजन दोस्रो भएको अवस्थामा समेत सिटीले यो समयमा ३७ गोल गरिसकेको थियो।
गार्डिओलाको समयमा औषतमा हेर्दा हरेक खेलमा दुई गोलमा अवस्थामा बढिरहेको सिटी टिममा अहिले १.५ को औषत देखिन्छ। यसैले आउने जनवरी ट्रान्सफर समयमा स्ट्राइकर ल्याउने योजना हो? भन्ने प्रश्नमा गार्डिओलाले त्यसलाई अस्वीकार गरे।